फागुन १, २०७५ | जुना थापा
ठ्वास्स गन्हाउने, कहिल्यै नकोरिएको र ननुहाएको जस्तो जिङ्ग्रिङ्ग्र फुस्रो, जगल्टिएको कपाल ! सधैं त्यही खुइलिएको कालो ज्याकेट; त्यो पनि धुलाम्मे ! खुट्टामा फोहोर गोल्डस्टार जुत्ता !अव्यवस्थित ! निराशापनको कालो बादल मडारिएको अनुहार अनि सधैं एउटै आसनमा बसी निकाल्ने झिजाे लाग्दो क्यारक्यार आवाज !
म स्याङ्जाको एउटा गाउँमा हुर्कें, बढें र पढें । हिंडेर दुई घण्टा लाग्थ्यो विद्यालय पुग्न । आफूलाई पढाइ–लेखाइ गराएर आजको अवस्थामा पुर्‍याउन सहयोग गर्ने आफ्ना शिक्षकहरूको बारेमा अहिले आएर यस्तो टिप्पणी गर्दा कतिलाई उहाँहरूको बेइज्जत गरेजस्तो पनि लाग्न सक्छ । तर, मैले आफू विद्यार्थी हुँदा भोगेको र देखेको वातावरणको पर्दा मात्र उघार्न खोजेकी हुँ ।
यी अनुभवले अहिले शिक्षक बनेकी मलाई कर्तव्यशील, नैतिकवान र जिम्मेवार बन्न झ्स्काइरहन्छन् । किनकि ती भोगाइले मलाई पाठ सिकाएका छन् । भविष्यमा मेरा विद्यार्थीले पनि मेरो बारेमा त्यस्तो खराब छवि नबनाउन् भन्ने मेरो प्रयास हुन्छ ।
मुख्य कुरा शिक्षकले आफूसँग भएको ज्ञान दिन र विद्यार्थीलाई राम्रा व्यवहार सिकाउन सबभन्दा पहिले कक्षामा विद्यार्थीले शिक्षकका कुरा राम्ररी सुन्ने र विश्वास गर्ने अवस्था हुनुपर्छ। यस्तो विश्वासको वातावरण बनाउने पहिलो खुट्किलो नै शिक्षकको व्यक्तित्व हो।
अहिले धेरै विद्यालय सूचनाप्रविधिसँग जोडिएका छन् । शिक्षक साथीहरू अवश्य पनि रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने, पत्रपत्रिका पढ्ने गर्नुहुन्छ । तर, कतिपय शिक्षकहरूले आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा अझ पनि त्यति ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन । उही, आफूले पढ्दा आफ्ना शिक्षकले जे गर्थे आफू पनि त्यस्तै गर्ने, त्यस्तै सोच्ने ! यसको अर्थ, सबै त्यस्तै छन् र म आफू ठीक छु भन्न खोजेको होइन । शिक्षण अनुकरणीय पेशा हो । विद्यार्थीलाई किताबमा जे छ त्यही पढाउने, घोकाउने, लेखाउने, छलफल गराउने मात्र शिक्षण–सिकाइ होइन । शिक्षकको बानी, बोली वचन, समय व्यवस्थापन, लवाइखवाइ आदिको अनुकरण गर्दै उनीहरूको बाहिरी आवरणबाट पनि बालबालिकाले प्रशस्त सिक्ने गर्दछन्; जुन शिक्षा व्यावहारिक पनि हुन्छ ।
शिक्षकको व्यक्तित्वमा यसरी जोड दिनुको अर्थ विद्यार्थीलाई शिक्षकप्रति विकर्षण भएर उसको सिकाइमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस् भन्ने मात्र हो । अझै पनि हामीमध्ये कति जना विद्यालय जाँदा आफ्नै घर जस्तो ठान्ने, कपाल समेत राम्ररी नकोर्ने, जताततै खुम्चिएका अनि मैला पोशाक लगाउने, नियाउरो अनुहार अनि कुनै ऊर्जा नभएको आवाज लिएर कक्षाकोठामा पस्छौं । हेर्दा नै ‘यस्ता शिक्षकले खै के सिकाउनु होला र ? आफैं पीडित हुनुहुन्छ जस्तो छ !’ भन्ने छाप विद्यार्थीमा पार्छौं । हिजोआजका बालबालिकाले हामी शिक्षकका लगाउने, खाने, बोल्ने, हिंड्ने लगायतका कुराहरूमा पहिलेभन्दा बढी ध्यान दिने गरेको अनुभव गरेकी छु ।
कुनै शिक्षक कपडा त आकर्षक लगाउनुहुन्छ तर निचोरिएको कागती जस्तो हतास र निराश अनुहार लिएर कक्षामा जानुहुन्छ भने विद्यार्थीलाई आफूले भनेको कुरामा विश्वस्त गराउन उहाँलाई गाह्रो पर्छ।